Muxuu ka yiri Mourinho kulankii ugu horeeyay ee Alexis Sanchez uu u ciyaaray xalay Man United? – Gool FM
Muxuu ka yiri Mourinho kulankii ugu horeeyay ee Alexis Sanchez uu u ciyaaray xalay Man United?
Liibaan Fantastic January 27, 2018
(Manchester) 27 Jan 2018 Tababare Jose Mourinho ayaa ka hadlay kulankii ugu horeeyay ee Aexis Sanchez uu xalay u saftay kooxdiisa cusub ee Manchester United.
Man United ayaa 4-0 uga adkaatay xalay kooxda Yeovil Town kulan ka tirsanaa wareega 4-aad ee koobka FA Cup-ka, Sanchez ayaana caawiye ka ahaa goolkii Herrera.
Mourinho ayaa sheegay in Alexis Sanchez uusan ahayn laacib ku cusub taageerayaasha maadama uu 3-sano ka ciyaarayay horyaalka ingiriiska, wuxuuna yiri:
“Aad ayaan ugu faraxsanahay wixii uu soo bandhigay, mana u malaynayo in qaab ciyaareedka Sanchez uu lama filaan ahaa maadama uu 3-sano ku qaatay Premier League, markaas oo uu isbuuc walba ciyaarayay, dhamaan waa ay garanayaan qofka uu yahay Alexis Sanchez”.
“Sanchez waa nuuca ciyaartoy ee marka aad soo gadato aadan ka walwalayn la qabsigooda kubadda ingiriiska, waa laacib cajiib ah taasna wuxuu soo muujiyay 3-dii sano ee uu ka ciyaarayay ingiriiska, sifiican ayuu noola tababartay maalmihii u danbeeyay”.
“Sanchez waa laacib weerar ah oo ku cusub kooxda laakiin waa laacib inbadan bisil isla markaana leh khibrad badan, tayo ayuu ku soo kordhin doonaa safka kooxda, aad ayaan ugu faraxsanahay inuu ka midyahay kooxdeena”.
Inter oo saxiixa Daniel Sturridge kala heshiisay Liverpool
Juan Cuadrado oo qaliin maraya iyo Juventus oo suuqa ka raadinaysa badalkiisa